WAAYIHII WARSAME Q28AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q28AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q28AAD
Sabtidii ayuu Warsame maamo Caasho u yimid, maamo Caasho na maba aysan warwareejine waxa ay u sheegtay in ay bishii labo boqol oo doolar siin doonto uu na shaqayn doono lix maalmood jimcada na fasax yahay. Markii uu aqbalay waxa ay bartay qiimaha qalabka dukaanka yaalla iyo magacyadooda sidoo kale waxa ay tustay buug wayn oo ay ku qoran yihiin magacyada qalabka dukaanka lagu iibiyo iyo qiimaha ka ma dambaysta ah ee lagu iibin karo maadaama suuqa Islii alaabuhu aysan qiimo go’an lahayn ee gorgoro wax lagu gato.
Muddo yar kadib Warsame dukaankii si fiican buu u la qabsaday qiimihii alaabooyinka dusha ayuu ka qabtay maamo Caasho na waxa ay gaartay heer ay dukaanka ku aamminto oo ay kaligiis uga tagto.
Maamo Caasho waa hooyo dhashay toban carruur ah oo ay ugu wayn tahay Idil oo wax ka barata Jaamacadda Nairobi. Maamo Caasho odaygeedu waa Xaaji Doolaal oo ah baabuurrey leh tobaneeyo baabuurta waawayn ah ee xamuulka ka daabbula dekadda Mombasa u na kala goosha inta badan dalalka bariga iyo bartamaha Afrika.
Qoysku waa qoys dhaqaale ahaan ladan oo deggan guri ay leeyihiin oo ku yaalla xaafadda South Sii (C) oo ah xaafad ay deggan yihiin soomaalida ladan ee Nairobi deggan.
Maamo Caasho subax walba Warsame waxa ay u keentaa quraac qadadana gabar jaariyad ah oo guriga maamada ka shaqaysa ayaa duhurkii u keenta. Maamo Caasho waxa ay Warsame ka codsataa in uu habeenkii guriga Casho u yimaado laakiin Warsame mar walba waa uu ka cudurdaartaa asaga oo ku marmarsiyooda iskool baan aadayaa iyo wax la mid ah.
Maalmaha sabtida iyo axadda Idil ayaa dukaanka timaadda oo maalintii oo dhan Warsame dukaanka la iibisa. Idil inta badan af Sawaaxili ayay ku hadashaa ama Ingiriisi. Ayaamihii hore oo dhan Warsame iyo Idil ka ma aysan wada hadli jirin wax dhaafsiisan dukaanka iyo alaabta dhextaal. Maalin ayuu Warsame waydiiyay Idil in ay af Soomaaliga qori karto iyo in kale. Idil waxa ay ugu jawaabtay in aysan qori karin waligeedna aysan isku dayin in ay barato. Waxa ay intaas u raacisay in qoyskeedu Soomaaliya ka qexeen ayada oo saddex jir ah. Warsame ayaa Idil ku yiri
“ka warran haddii aan Far-Soomaaliga ku baro adna aad Sawaaxiliga i bartid? Idil oo qoyslaysa ayaa tiri, “waa qorshe wanaagsan laakiin ma bare Afka Soomaaliga ah ayaa tahay?”
“Maya laakiin si fiican ayaan u aqaan oo waan ku bari karaa.”
“Maxaad kale oo taqaan?” Ayay waydiisay.
“Wax kale ma aqaanni” ayuu ugu jawaabay.
“Oo iskool ma aadan dhigan miyaa?”
“Ilaa heerkee ka gaartay?”
“Ilaa dugsiga sare.”
“Ingiriisiga sidee isku tihiin?”
“Oo intee ku baratay Kenya mise Soomaaliya?”
“Soomaaliya,”Ayuu Warsame ku jawaabay.
“Kenya meeqa sannadood ayaan joogtaa?” Ayay waydiisay.
“Dhawr bilood,” Ayuu yiri.
Warsame iyo Idil maalintaaa wixii ka dambeeyay waxa ay noqdeen jaallayaal sheekadu isugu baxdo waxa uu na bari jiray far qoraalka soomaaliga halka Idil bari jirtay erayo badan oo Af Sawaaxili ah casharka oo fasalka ka soo qaatana ka caawin jirtay.
Idil waa 21 jir jooggeedu meeldhexaad yahay, dhexyar iyo misko waawayn, horraaddana aad u mooddid in ay ragga jidka maraya daandaansanayaa midabkana madow maarriin-xigeen, dirkii isirka soomaaliga ah. Ilkaha dabar aan wada daboolin ayay ku lahayd. Warsame ayaa maalin waydiiyay “Ma Burco ama Gaalkacyo ayaad ka timid?” “Waalidkeey xattaa waligood cag ma dhigin,” ayay ugu jawaabtay.
“Oo haddaas maxaa ilkahaagu la cas yihiin?” ayuu waydiiyay.
“Ma ogi,” ayay ku tiri.
Maalin Idil oo dukaanka hadba dhinac ugu dhex soconaysa ayuu hal mar Warsame ku dhuftay baydad ka mid ah heesta Xasan Aadan Samatar ee DEJIYA, Timaha kala degay dusheediyo, ilkaha dabarkalay dilee. Idil ma ay fahmin waxa uu u la jeeday balse markuu in badan ku celceliyay ayay garatay in ay hees tahay inkasta oo aysan heesaha soomaaliga ah dhagaysan jirin haddana ilkaha dabarka leh iyo timaha kala degay ayay inta dhagta la sii raacday ku tiri “Wadaad baan kuu malaynayaye illaa heesaha waad dhagaysataa?”. “Waad adiga dartaa,” ayuu yiri.
“Haa adiga dartaa”
“Horta heesta dajiya waligaa ma dhagaysatay?” Ayuu waydiiyay.
“Maya waligay hees soomaali ah ma dhagaysan waanse maqlay ayaga oo meelahaas ka daaran,”
“Fadlan dhagayso heesta dajiya bluetooth ayaan kuugu dirayaaye,”
“Haye ii soo dir.”
Tan iyo habeenkii markii ay Idil guriga tagtay Dejiya ayay dhagaysnaysay dusha ayay ka xifdisay dhammaan erayadeeda.
Warsame jacayl daran ayuu Idil u qaaday maalin kastana heesba heesta ka daran tahay ayuu soo diray ugu dambaynna dabinkii Warsame ee Dejiya ku bilowday Idil waa ay ku soo dhacday.
Haasaawe jacayl ayaa u bilowday iyo in qofba kan kale ku yiraahdo waan ku doonayaa iyo dadkaan kuugu jecelahay. Farriimaha gaagaaban ee taleefanka gacanta ayaa ahaa mishiinka riixaya haasaawaha jacayl ee Warsame iyo Idil, waayo waa ay adkayd in bannaanka isula baxaan maadaama Idil aysan awoodin in ay guriga ka maqnaato marka ay Jaamacadda iyo dukaanka joogto maahane.
Dhawr goor oo uu Warsame damcay in uu Idil ka dhaadhiciyo in ay habeennimo bannaanka u soo baxdo haddana waxa ay u sheegtay in aysan taasi dhici karin.
Idil si daran ayay u doonaysay in ay Warsame kula kulanto meel aan dukaanka ahayn ugu dambaynna waxa istustay in Jaamacaddu tahay halka ku habboon in ay Warsame kulmaan.
Maalin walbo oo jimce ah Warsame waxa uu iska soo xaadiriyaa barxadda Jaamacadda Nairobi halkaas oo ay Idil ku kulmaan marka ay gasho nasashada fasallada u dhaxaysa markii dambana waxa ay bilaabeen in ay aadaan beerta Uhuru Park marka Idil Jaamacadda ka soo baxdo afarta galabnimo ilaa lixdana ay halkaas joogaan.
Warsame iyo Idil ugu dambayn waxa ku ballameen in ay isguursadaan marka ay Idil Jaamacadda dhamayso sannad kadib.